Tube ice umshini - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Umthamo wokukhiqiza weqhwa
3T / day tube umshini weqhwa
3 amathani ngamahora angama-24
Umshini weqhwa le-5T / wosuku
5 amathani ngamahora angama-24
10 / day tube umshini weqhwa
Amathani ayi-10 ngamahora angama-24
20T / day tube umshini weqhwa
Amathani angama-20 ngamahora angama-24
Ikhophi lokuhle futhi elingcono kunokuhle kakhulu.
Ngokuhlukile kwamanye amafektri omshini weqhwa, izinhlelo zeHerbin Ice zanikela ngobuchwepheshe bendabuko besiShayina be-tube ice kusukela ngo-2009. Sikopishe ubuchwepheshe beVogt kusukela ngo-2009
AbakwaHerbin ice Systems bathenga imodeli esetshenzisiwe ye-Vogt eyi-P34AL, kwesinye isitshalo seqhwa saseChina ngo-2009. Sayiqaqa, saphinde sakopisha zonke izingxenye nokwakhiwa kohlelo. Sisebenzisa abahlinzeki bezinto ezifanayo njengeVogt, njengeParker liquid level sensor, iParker valve yengcindezi njalonjalo. Sikopishe ukunikezwa koketshezi okuhlakaniphile kweVogt, sifaka isamukeli soketshezi ngaphezu kwe-evaporator ukuvikela ukungena oketshezi ku-compressor, sengeze abashintshi bokushisa ukwenza ngcono ukusebenza kahle kwezinhlelo. Senze nentuthuko eningi ngokususelwa kuleyo khophi ukwenza imishini yethu yeqhwa le-tube iphelele ngangokunokwenzeka.
Ochwepheshe bathi imishini yami ye-tube ice ingcono kakhulu kune-Vogt manje, ngoba uhlelo lwethu lokusabalalisa uwoyela lubushelelezi, futhi ukwakheka kwethu kulula kakhulu ukusebenziseka.
Ngenxa yobuchwepheshe bethu obuphakeme kanye nokwakhiwa kwesistimu ehlakaniphile. Imishini yethu ye-tube ice isebenzisa ugesi omncane osetshenziselwa ukwenza inani elifanayo leqhwa.
Isibonelo, ake sibale ngomshini weqhwa we-Tube ongu-20T / ngosuku.
Eminye imishini ye-Tube esehlile amanzi e-Tube isebenzisa u-100KWH kagesi ngokwenza ithani elilodwa leqhwa.
Imishini yami ye-Ice Tube isebenzisa ugesi ongu-75KWH kuphela ngokwenza ithani elilodwa leqhwa.
(100-75) x 20 x 365 x 10 = 1825000 KWH. Uma ikhasimende likhetha umshini wami weqhwa ongu-20T Tube, uzokonga u-1825000KWH kagesi eminyakeni eyishumi. Ungakanani u-1825000KWH kagesi ezweni lakho?
3. Ikhwalithi enhle enewaranti ende.
Ama-80% wezinto ezikumshini wami weqhwa le-Tube ziyefana noma ziyafana neVogt.
Ezinye izingxenye zingeniswa zisuka e-USA ngqo.
Lokho kukuqinisekisa ngemishini yeqhwa le-Tube esezingeni eliphakeme ngokusebenza okuhle kakhulu.
Iwaranti yohlelo lwefriji yiminyaka engama-20. Uma ukusebenza kwesistimu yefriji kuguquka futhi kube okungajwayelekile ngaphakathi kweminyaka engama-20, sizoyikhokhela.
5. Isikhathi sokulethwa okusheshayo.
Asidingi izinsuku ezingaphezu kwezingu-20 ukwenza imishini yeqhwa le-Tube incane kune-20T / ngosuku.
Asidingi izinsuku ezingaphezu kwezingu-30 ukwenza imishini ye-Tube yeqhwa phakathi kuka-20T / ngosuku kuye ku-40T / ngosuku.
Ikhasimende ngeke lilinde isikhathi eside ukuthola imishini ye-Tube yeqhwa ngemuva kokukhokha.
Nalu uhlu lwamapharamitha wemishini yami ejwayelekile ye-Tube yesithenjwa sakho.
Imishini yeqhwa le-Tube ingenziwa ngezifiso, futhi ipharamitha ingahluka ngokufanele.